Labada Korea oo madaafiic isweydaarsaday - BBC News Somali
Labada Korea oo madaafiic isweydaarsaday
Dalalka Waqooyi iyo Koonfur Korea ayaa madaafiic isku-weydaarsaday xuduudahooda aadka loo ilaaliyo.
Waxaa loo maleynayaa in dhacdada ay timid, markii Pyongyang ay xabado u riday dhinaca sameecado waaweyn oo baahiya dhambaalada dacaayadaha shuuciyadda Waqooyiga.
Wax qasaare ah lama soo sheegin, balse waxay Seoul kaga jawaabtay inay dib ugu rido Waqooyiga dhowr madfac. Waxaana sidoo kale la amray in laga raro dadka Koonfur Korea ee ku nool aagga weerarka Waqooyiga.
Koonfur Korea ayaa bilowday dacaayado sameecado codad dhaadheer baahiya, kaddib markii labo ka mid ah ciidamadooda oo ilaalinayay xadka ay ku dhaawacmeen miinada dhulka la dhigo horraantii bishan. Waxayna sheegeen in waqooyigu ay miinadu dhigeen oo ah wax ay Pyongyang beenisay.